Safiirka Somaliland ee Faransiiska oo Ka Qayb-galay Shirka Ka faa’iidaysiga Khayraadka Badda – WARSOOR
Safiirka Somaliland ee Faransiiska oo Ka Qayb-galay Shirka Ka faa’iidaysiga Khayraadka Badda
Faransiiska- (warsoor) – Safiirka Somaliland u fadhiya dalka Faransiiska ayaa ka qayb-galay shirka 12-aad eeka faa’iidaysiga khayraadka badda oo ka dhacay La Rochelle ee dalka faransiiska.
Shirkan oo ah mid sanadle ah waxaa ka qayb-galay eryooyinka dhawr boqol gaadhaya. Shirkan ayaa ah shirkii ugu horeeyey ee lagu marti-qaado Somaliland.
Safiirka Somaliland u fadhiya dalka Faransiiska oo shirkaasi ka hadlay ayaa si qoto dheer ugu sharaxay ka soo qayb-galayaashii xeebaha Somaliland iyo khayraadka ku duugan, waxaanu u soo jeediyey inay ka faa’iidaystaan khayraadka Somaliland oo ay maal-galiyaan.
Halkan ka daawo warbixin uu ka diyaariyey Warkiye Xasan Faarax Qamaan: